Iphupha malunga nePeach Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ipesika ihlala isikhohlisa ukuba siyilume ngephunga layo elimnandi nelinevumba elimnandi. Ngaphandle kwendawo ethambileyo kunye nevelvet, ivakala iphantse ibe mpuluswa kwaye ithambise ulusu lwethu xa siyibambe ngesandla.
Kodwa lithetha ntoni ipesika "yepesika" kuwe? Kutheni le nto yabonakala kuwe emaphupheni akho? Cinga kwakhona ngephupha lakho ngoxolo kwaye unikele ingqalelo kwezinye iinkcukacha. Kuba ezi zikwabalulekile ekutolikeni amaphupha. Cinga ngeemvakalelo obenazo ngexa uphupha. Oku kukwavumela izigqibo ukuba zenziwe malunga nokutolikwa kwesimboli yephupha.
1 Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona uphawu lwephupha "ipesika" njenge Isimboli sesondo, ipesika ibalulekile njengesiqhamo esivuthiweyo ephupheni. Kungenxa yokuba olu luphawu lothando olugqibeleleyo.
Ukubona kwepesika ephupheni kufuna ukuyenza icace ephupheni ukuba uthando oludlulileyo lunokuvuselela kwikamva elikufutshane. Ukuba iipesika zisephupheni kunye namagqabi omthi, uphawu lwephupha lubonisa ukuba iphupha kunokwenzeka emva kwexesha lokuswela. Ukufezekisa iinjongo unako.
Ipesika evuthiweyo njengophawu lwephupha ikwenza kucace ephupheni ukuba ubudlelwane babo buya kuhlala buhleli. Ukuba umntu ophuphayo ukhetha okanye ashukumise iipesika emthini ephupheni, umphuphi akanamonde kwizinto zothando el mundo yomlindo.
Ukuba iphupha libonelela ngeepesika ephupheni, uyaboniswa ngokuchazwa ngokubanzi kwephupha ukuba liziphatha kwihlabathi elivukayo njengentliziyo ebambekayo. Ukuba, ngokuchaseneyo, xa uphupha unikwa iipesika ephupheni, umlingane wakho sisifo sentliziyo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, amaphupha ababhinqileyo kufuneka balumkele abo babaziyo.
Ukutya ipesika njengophawu lwephupha kubonisa ukuba ubudlelwane buyabophelela kwiqabane kunakwiphupha ngokwalo.Ipesika ebolileyo ephupheni ihlala izisa ukuphoxeka okukrakra kwimicimbi yothando. Iphupha lepesika ebunileyo sisiboniso se Ukuchasana kwaye uqonde iziganeko ezingathandekiyo. Ukuba umphuphi utyala umthi wepesika ephupheni lakhe, oku kufanekisela inkqubela phambili yomsebenzi ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha.
Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yephupha "ipesika" ifanekisela ukutolikwa kwengqondo yephupha. iimfuno ezingaqhelekanga yokuphupha. Ipesika ephupheni ngamanye amaxesha inokuqondwa njengophawu lwesibini esikhulileyo kwaye esizinzileyo. Kodwa uninzi lwamaxesha lukhomba kwibali lothando elidlula ngokukhawuleza.
Ukufumana ulwalathiso oluchanekileyo lwenkcazo, umphuphi kufuneka athathele ingqalelo ngokuchanekileyo iimeko zakhe zobomi kwihlabathi elivukayo. Oku kuvumela isiphelo kutoliko oluchanekileyo lwamaphupha.
Uphawu lwephupha «ipesika» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha "ipesika" luphawu lwabo. amandla yokuphupha, yakhe projekthi ukukhula ngakumbi ebomini bokuvuka.